ခါးနာလှနျးနတေယျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ – DVB
Published By DVB |7September, 2019
ခါးနာတဲ့ပွဿနာဟာ အသကျအရှယျမရှေး လူတိုငျးနီးပါး ကွူံတှရေ့တတျတဲ့ပွဿနာတဈခုပါ။ အလေးအပငျမလိုကျလို့ ဖွဈစေ၊ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာ ပွငျးထနျသှားလို့ဖွဈစေ ဒီ ခါးနာတဲ့ ပွဿနာကိုခံစားရမှာပါ။ ဒီတော့အခနျ့မသငျ့လို့ ကိုယျကလညျး ခါးနတေယျဆိုရငျဆိုရငျ သကျသာအောငျဘယျလိုလုပျကွမလဲ။
အိပ်တဲ့ ပုံစံကို သတိထားပါ။
ခါးနာနတေော့ ထိုငျလို့အဆငျမပွေ။ အဲတော့ လှဲအိပျ။ လှဲအိပျတော့ ခါးပိုနာနဲ့ သံသရာလညျနတေတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မအိပျလို့ကလညျး မရဘူးလေ။ ဒီတော့ ဘေးစောငျးလှဲအိပျပွီး ဒူးခေါငျးကွားထဲ ခေါငျးအုံးလေးညှပျထားပါ။ ပကျလကျအိပျမယျဆိုရငျတော့ ဒူးခေါငျးအောကျ ခေါငျးအုံးခံထားတဲ့ အနအေထားမြိုးနဲ့ အိပျစကျပါ။ ဒါဆိုရငျ ခါးနာတဲ့ဝဒေနာလညျး သကျသာသှားသလို နောကျထပျခါးနာမယျ့ အဖွဈတှကေို ကွိုတငျကာကှယျပွီးသားလညျးဖွဈမှာပါ။
ခါးကိုဆနျ့ထားပွီး မတျမတျအနအေထားနဲ့ မထိုငျဘဲ ပငျြးရိပငျြးတှဲနဲ့ လြှောထိုငျရငျ ခါးပိုနာပါလိမျ့မယျ။ ဒီတော့ ခါးကိုမတျမတျဆနျ့ နောကျကြောထိုငျခုံကိုမီတဲ့ အနအေထားနဲ့ထိုငျပါ။ ထိုငျခုံနဲ့ခါးကွားထဲ ခေါငျအုံးးလေးခံထားပွီးထိုငျလို့လညျး ရပါတယျ။
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျလိုကျတာကွောငျ့ တငျးနတေဲ့ ကွှကျသားတှေ ပွလြေော့သှားသလို ညကျနတေဲ့ အကွောတှလေညျး လှတျသှားနိုငျပါတယျ ။ဒါပမေယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျး ပွငျးထနျရငျ ခါးပိုနာသှားတတျတာကိုတော့ သတိထားစခေငျြပါတယျ။
တဈခြိနျလုံးခညျြး အိပျရာပျေါ လှဲမနပေါနဲ့။
ခါးနာတဲ့အခါ အိပျရာပျေါ လှဲအိပျနရေတာ သကျသာသယောငျရှိပယျေ့ လှဲနတေဲ့အနအေထားက ခါးကို ပိုပွီး အားပွုသလိုဖွဈသှားတာကွောငျ့ တဈခြိနျလုံး အိပျရာပျေါမှာလှဲနမေယျ့အစား ရကေူးတာ၊ လမျးလြှောကျတာ ။ယောဂ ကစားတာတို့ လုပျပေးပါ။
နာနတေဲ့နရောကို ရခေဲကပျပါ။ ရနှေေးကပျပါ။
နာပွီးရောငျနတေဲ့ ခါးနရောကို အရောငျကအြောငျလို့ ရခေဲကပျတာ ( ဒါမှမဟုတျ )ရနှေေးအိတျကပျပေးတာမြိုးလုပျပေးလို့ရပါတယျ။
တငျးနတေဲ့ ကြွက်သားတှေ ပွလြေော့သှားစဖေို့၊ ညှပျနတေဲ့အကွောတှေ လှတျသှားစဖေို့ ခါးကို နှိပျပေးလို့ရပါတယျ။ တဈခုရှိတာက အကွောပိုငျးဆိုငျရာ တကယျလို ကြှမျးကငျြတဲ့ ဆရာနဲ့ နှိပျဖွဈဖို့လိုပါတယျ။
ခါးနာတာကိုသကျသာစဖေို့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှေ ဆရာဝနျနဲပတိုငျပငျပွီး ဝယျသောကျလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆေးတဈခုတညျးကိုအားကိုးလို့တော့ မရပါဘူး။ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှေ စှဲသောကျတာမြားရငျ အစာအိမျရောဂါတှေ ဖွဈတတျသေးတာကွောငျ့ပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဆေးလေးလညျးသောကျ လကေ့ငျြ့ခနျးလေးလညျး လုပျပါ။
ဒါကလညျး အသုံးမြားတဲ့ ဆေးနညျးတဈခုပါ။ ရောငျရမျးခွငျးနဲ့ နာကငျြခွငျးတှေ သကျသာစဖေို့ ခါးဆဈရိုးထဲ စတီးရှိုကျ ဆေးတဈမြိုးထိုးသှငျးတဲ့နညျးပါ။ ဒါကိုတော့ ကိုယျ့ခါးနာတဲ့ ပွငျးထနျခွငျးပျေါမှာမူတညျပွီး ဆရာဝနျက ထိုးသငျ့မထိုးသငျ့ ဆုံးဖွတျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ခါးဆဈရိုးကြှံပွီး အကွောပျေါ သှားဖိနတေဲ့ ခါးနာတဲ့ ပွဿနာမြိုးတှမှောဆိုရငျ တော့ ကြှံနတေဲ့ ခါးဆဈရိုးကို ပွနျပွုပွငျဖို့ ခှဲစိတျမှုတှေ လုပျရတတျပါတယျ။
ဒါတှကေတော့ ခါးနာတာကို သကျသာစဖေို့အတှကျ လုပျလို့ရတဲ့နညျးလမျးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ မဖွဈခငျတညျးက ကွိုတငျကာကှယျတာအကောငျးဆုံး ဖွဈတာကွောငျ့ ပုံစံတကြ ထိုငျတာ ၊အိပျစကျတာ ၊နညျးလမျးမှနျမှနျ အလေးအပငျမတာ၊ လကေ့ငျြ့ခနျး မှနျမှနျလုပျတာတှနေဲ့ ခါးနာတာကို ကွိုတငျကာကှယျလို့ရပါတယျ ။ ။
ရေးသားသူ Dr. Thin Yadanar @ Frances ဆေးပညာပိုငျးဆိုငျရာတညျးဖွတျသူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤဆောငျးပါးကို DVB ၏ မိတျဘကျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ဆေးပညာဝကျဘျဆိုဒျ hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖျောပွပါသညျ။ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zawgyi_version
ခါးနာတဲ့ပြဿနာဟာ အသက်အရွယ်မရွေး လူတိုင်းနီးပါး ကြူံတွေ့ရတတ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ။ အလေးအပင်မလိုက်လို့ ဖြစ်စေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ပြင်းထန်သွားလို့ဖြစ်စေ ဒီ ခါးနာတဲ့ ပြဿနာကိုခံစားရမှာပါ။ ဒီတော့ အခန့်မသင့်လို့ ကိုယ်ကလည်း ခါးနေတယ်ဆိုရင်ဆိုရင် သက်သာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
ခါးနာနေတော့ ထိုင်လို့အဆင်မပြေ။ အဲတော့ လှဲအိပ်။ လှဲအိပ်တော့ ခါးပိုနာနဲ့ သံသရာလည်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မအိပ်လို့ကလည်း မရဘူးလေ။ ဒီတော့ ဘေးစောင်းလှဲအိပ်ပြီး ဒူးခေါင်းကြားထဲ ခေါင်းအုံးလေးညှပ်ထားပါ။ ပက်လက်အိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒူးခေါင်းအောက် ခေါင်းအုံးခံထားတဲ့ အနေအထားမျိုးနဲ့ အိပ်စက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ခါးနာတဲ့ဝေဒနာလည်း သက်သာသွားသလို နောက်ထပ်ခါးနာမယ့် အဖြစ်တွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါ။
ခါးကိုဆန့်ထားပြီး မတ်မတ်အနေအထားနဲ့ မထိုင်ဘဲ ပျင်းရိပျင်းတွဲနဲ့ လျှောထိုင်ရင် ခါးပိုနာပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ခါးကိုမတ်မတ်ဆန့် နောက်ကျောထိုင်ခုံကိုမီတဲ့ အနေအထားနဲ့ထိုင်ပါ။ ထိုင်ခုံနဲ့ခါးကြားထဲ ခေါင်အုံးးလေးခံထားပြီးထိုင်လို့လည်း ရပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်တာကြောင့် တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေ ပြေလျော့သွားသလို ညက်နေတဲ့ အကြောတွေလည်း လွတ်သွားနိုင်ပါတယ် ။ဒါပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း ပြင်းထန်ရင် ခါးပိုနာသွားတတ်တာကိုတော့ သတိထားစေချင်ပါတယ်။
တစ်ချိန်လုံးချည်း အိပ်ရာပေါ် လှဲမနေပါနဲ့။
ခါးနာတဲ့အခါ အိပ်ရာပေါ် လှဲအိပ်နေရတာ သက်သာသယောင်ရှိပေယ့် လှဲနေတဲ့အနေအထားက ခါးကို ပိုပြီး အားပြုသလိုဖြစ်သွားတာကြောင့် တစ်ချိန်လုံး အိပ်ရာပေါ်မှာလှဲနေမယ့်အစား ရေကူးတာ၊ လမ်းလျှောက်တာ ။ယောဂ ကစားတာတို့ လုပ်ပေးပါ။
နာနေတဲ့နေရာကို ရေခဲကပ်ပါ။ ရေနွေးကပ်ပါ။
နာပြီးရောင်နေတဲ့ ခါးနေရာကို အရောင်ကျအောင်လို့ ရေခဲကပ်တာ ( ဒါမှမဟုတ် )ရေနွေးအိတ်ကပ်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေ ပြေလျော့သွားစေဖို့၊ ညှပ်နေတဲ့ အကြောတွေ လွတ်သွားစေဖို့ ခါးကို နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက အကြောပိုင်းဆိုင်ရာ တကယ်လို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာနဲ့ နှိပ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
ခါးနာတာကိုသက်သာစေဖို့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ ဆရာဝန်နဲပတိုင်ပင်ပြီး ဝယ်သောက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးတစ်ခုတည်းကိုအားကိုးလို့တော့ မရပါဘူး။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ စွဲသောက်တာများရင် အစာအိမ်ရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်သေးတာကြောင့်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဆေးလေးလည်းသောက် လေ့ကျင့်ခန်းလေးလည်း လုပ်ပါ။
ဒါကလည်း အသုံးများတဲ့ ဆေးနည်းတစ်ခုပါ။ ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ နာကျင်ခြင်းတွေ သက်သာစေဖို့ ခါးဆစ်ရိုးထဲ စတီးရွိုက် ဆေးတစ်မျိုးထိုးသွင်းတဲ့နည်းပါ။ ဒါကိုတော့ ကိုယ့်ခါးနာတဲ့ ပြင်းထန်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီး ဆရာဝန်က ထိုးသင့်မထိုးသင့် ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခါးဆစ်ရိုးကျွံပြီး အကြောပေါ် သွားဖိနေတဲ့ ခါးနာတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေမှာဆိုရင် တော့ ကျွံနေတဲ့ ခါးဆစ်ရိုးကို ပြန်ပြုပြင်ဖို့ ခွဲစိတ်မှုတွေ လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ခါးနာတာကို သက်သာစေဖို့အတွက် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်ခင်တည်းက ကြိုတင်ကာကွယ်တာအကောင်းဆုံး ဖြစ်တာကြောင့် ပုံစံတကျ ထိုင်တာ ၊အိပ်စက်တာ ၊နည်းလမ်းမှန်မှန် အလေးအပင်မတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်တာတွေနဲ့ ခါးနာတာကို ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရပါတယ် ။ ။ ရေးသားသူ Dr. Thin Yadanar @ Frances ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤဆောငျးပါးကို DVB ၏ မိတျဘကျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ဆေးပညာဝကျဘျဆိုဒျ hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖျောပွပါသညျ။
မုံရှာအကဉျြးထောငျမှ နိုငျငံရေးအကဉျြးသား၂၁ ဦးပွနျလှတျ၊ ကြောငျးသား ၁ ဦးပွနျအဖမျးခံရ
တရုတျ အဆငျ့မွငျ့လကျနကျစနဈ တီထှငျမှုကို အမရေိကနျ အနီးကပျစောငျ့ကွညျ့နေ
လူကာကူ ကိုယျစိတျနှဈပါးစလုံး ပငျပနျးနှမျးနယျနကွေောငျး နညျးပွတူခယျြ သုံးသပျ
ရစေကွိုမွို့ ပေါကျတောကြေးရှာက မိုငျတဲလျတာဝါတိုငျ ဖောကျခှဲဖကျြဆီးခံရ
သံဖွူဇရပျမွို့က ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးရုံး ဖောကျခှဲခံရ
မွနျမာတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကူးစကျခံရသူပေါငျး ၄၉၀,၀၀၀ ကြျောရှိလာ